I-China UKWAKHA OKUQONDILE KU-SQUARE TUBE Mill Manufacture and Factory |Mingshu
Imishini eshiselwe ipayipi lemvamisa ephezulu
Ukwakheka Okuqondile ku-Square Tube Mill
Ukuma kwesikwele noma unxande kwakhiwa ngaphambi kokushiselwa kweshubhu, ngokuthuthuka okubalulekile ngokwemibandela
kwamandla kanye nokwehliswa kwezindleko zempahla.
1) Qhathanisa nendingilizi ibe isikwele & indlela yokwenza unxande, le ndlela ingcono ukuma onqenqemeni lwesigaba esiphambanayo, uma kuqhathaniswa, ububanzi be-semi-diameter ye-rac yangaphakathi buncane, futhi umphetho uyisicaba, uhlangothi luvamile, ukuma okuphelele ithubhu.
2) Umthwalo wonke womugqa uphansi, ikakhulukazi isigaba sokulinganisa.
3) Ububanzi be-steel strip cishe buncane ngo-2.4-3% kunalolo oluyindilinga lube isikwele/unxande, lungasindisa izindleko zempahla eluhlaza.
I-4) Yamukela indlela yokugoba enamaphuzu amaningi, gwema amandla e-axial nokuhuzuka ohlangothini, yehlisa isinyathelo sokwenza ngenkathi iqinisekisa ikhwalithi, okwamanje inciphisa ukumosheka kwamandla kanye nokuhuzuka kwe-roller.
5) Yamukela i-roller yohlobo oluhlanganisiwe ezindaweni eziningi, ibona ukuthi isethi eyodwa ye-roller ingakhiqiza.
bonke osayizi bamashubhu ayisikwele/awunxande anemininingwane ehlukene, yehlisa isitolo serola, yehlisa izindleko cishe ngo-80% kurola, isheshisa inzuzo yasebhange, ifinyeze isikhathi ekwakhiweni komkhiqizo omusha.
I-6) Wonke ama-roller angamasheya avamile, asikho isidingo sokushintsha ama-roller uma ushintsha usayizi weshubhu, ukulungisa kuphela isikhundla sama-roller ngemoto noma nge-PLC, futhi waqaphela ukulawula okuzenzakalelayo okugcwele;Inciphisa kakhulu i-
roller ukushintsha isikhathi, ukunciphisa umfutho zabasebenzi, ngcono ukukhiqiza ukusebenza kahle.
Imodeli Ishubhu yesikwele(mm) Ishubhu elingunxande (mm) Ubukhulu(mm) Isivinini (m/min)
Qaphela: Ulayini umkhiqizo ongajwayelekile futhi ungakhiqizwa ngokuya ngezidingo zomsebenzisi, ishidi lepharamitha elizosetshenziswa kuphela.
Okwedlule: ERW/HFW TUBE MILLS
Olandelayo: I-MSC 41 SERIES YAMANDLA EMNYAMA ISANDULO